Ọganihu na mmejuputa iwu nke BIM - ikpe nke Central America - Geofumadas
Ọganihu na mmejuputa iwu nke BIM - ikpe nke Central America
Eprel, 2019 Engineering, innovations
Ga BIMSummit na Barcelona izu gara aga na-atọ ụtọ. Hụ otu echiche dị iche iche, site na ndị nwere obi abụọ na nke ọhụụ, kwenyere na anyị nọ n'oge pụrụ iche nke mgbanwe na ụlọ ọrụ ndị sitere na njide nke ozi n'ọhịa ruo na ijikọta arụmọrụ na ezigbo nwa amaala. BIM na-arụ ọrụ dị oke mkpa na njikọta nke ike nke teknụzụ nke ndị ọrụ azụmaahịa na-eji, ọchịchọ maka ọrụ ka mma site na onye ọrụ njedebe nke ọrụ ọha na eze na nguzozi nke ọkọlọtọ nwere ike ịrụ.
Mana n'agbata akụkọ ọma banyere olile anya ọdịmma nke mba Nordic ebe ikwu okwu banyere OpenSource anaghịzi emejọ ọdịmma nke onye ọ bụla, yana mkpa ọ dị ngwa ngwa nke mba ndị na-ahụ maka teknụzụ ebe ndị ọrụ nzuzo mepụtara atụmatụ a, enwere ezigbo ikike nke mba ebe arụmọrụ na-esighị ike nke steeti n'ihi ọrụ nchịkwa ya na-achọ ọnọdụ kacha mma na mba ahụ. N'okwu a, anyị kparitụrụ ụka banyere mkparịta ụka ikpeazụ mụ na Gab!, Onye na-arụkọ ọrụ na Geofumadas onye, ​​na ọkara ọkara kọfị, gwara m banyere ọhụụ ya nke BIM na ọnọdụ Central America.
N'ikwu eziokwu, enwere ike ị nweta ahụmịhe ọganihu kachasị mma na mpaghara a site na nhụhụhụhụ usoro amachi; ya mere, anyị ga-eme ihe anyị nụrụ n’ebe ahụ. Site na mbido, enwere mgbasawanye dị elu nke mba dị iche iche dịka Costa Rica na Panama, agbanyeghị, na mba ndị ọzọ nke mpaghara ahụ, agbanyeghị na enwere ihe ọmụma na ọkwa nkeonwe, usoro agụmakwụkwọ na steeti anaghị ahụ anya na ọkwa mmejuputa; Ọ bụrụ na anyị ahụ ya site na BIM nke sara mbara, na karịa ịmebe ụlọ, ọ bụ atụmatụ nke na-ejikọ njikwa ozi na njikwa ọrụ n'ime usoro nkwado.
Akwukwo BIM Panama
N'ịbụ Panama mba nwere uto na-abawanye uru, enwere obere oghere na ịdị ngwa. Naanị ị ga-apụ n'ọdụ ụgbọ elu ma jee n'okporo ụzọ awara awara wee hụ na mpaghara ụlọ bụ ezigbo mmiri na Central America, yabụ, BIM bụ ngwakọta zuru oke nke njikọta gburugburu ebe obibi nke mejupụtara anụ ahụ, kọmputa na arụmọrụ dị iche iche. . Karịsịa, icheta ihe Panama dị ka mba nwere azụmahịa na-enwe ọnọdụ nke ụwa chọrọ, nke enweghị ike ịhapụ ịhapụ.
The 14 July 2016 na Panamanian Chamber of Construction CAPAC na njikọ na Panamanian Society of Engineers na Architects SPIA na Mahadum nke Panama, nkà na ụzụ na USMA, mara ọkwa na e kere eke nke a oru osisi na ga-enye mmejuputa BIM usoro, BIM Forum akpọ Panama.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwado nkwalite nke BIM dịka Autodesk, Bim Forum nke Panama, Bentley Systems, PCCad, Blue AEC Studio, Comarqbim, n'etiti ndị ọzọ.
Ọrụ BIM pụrụ iche nke dị na Panama bụ mgbasawanye nke Osimiri Panama.
Ụzọ BIM nke Osimiri Panama. Ọ natara Ntugharị Ahụmahụ Autodesk BIM maka nhazi nke mgbachi nke atọ ya.
N'ozuzu, enwere otutu oghere na nzuzo, ebe ndị ọkachamara na-achọ maka BIM mastery dị ka ihe achọrọ maka mmepe nke ọrụ ha.
Ihe gbasara BIM Costa Rica
Obodo a na-akwalite n'ụzọ ụfọdụ iji ojiji BIM mee ihe na mgbidi ọhụrụ ahụ. N'akụkụ buru ibu, n'ihi mkpa ụwa, ụfọdụ ụlọ ọrụ nzuzo na-amalite ime ụfọdụ usoro; Otú ọ dị, ọrụ a na-enye ndị ọkachamara BIM abụghị nanị, ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere mba South America. Costa Rica enweelarị Bim Forum Costa Rica.
Nzukọ BIM Forum Costa Rica bụ Kọmitii Kọmitii guzobere na nzube nke ịkwalite nyocha na iji nwayọọ nwayọọ arụ ọrụ nke usoro BIM na ụlọ ọrụ na-ewu ihe.
Dị ka ihe na-akpali ihe atụ, na Inter-American Development Bank (IDB Infrastructure Management na Division nke Science, Technology na Innovation (CTI), na-arụ ọrụ na incorporating BIM ke imewe na nlekọta nke akụrụngwa oru ngo.
Na Costa Rica, n'ihi na ihe atụ, ọ nọ na nkọwa nke na-ewu na-elekọta Mbugharị imewe Eserese BIM nlereanya na nlekota n'oge ewu. Nke ahụ bụ, ụgbọ elu 2D 3D ka gafere, na àgwà ọmụma, ewu usoro (4D) na-eri akara (5D) ga-ike; Nke a ga-eme ka ị mara oge, mgbalị na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ, iji gbanwee site na omenala omenala BIM. Zaa, akwụ ụgwọ, deadlines na kwesịrị mgbanwe n'oge na-ewu ọrụ na San Gerardo - Barranca, ga-jiri ya tụnyere ihe akuku Limonal - San Gerardo, nke nwere otu imewe nkọwa, na a ga-wuru n'out oge.
Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ dị anya ị ga-esi jee n'ógbè ahụ, ihe onye na-anya ụgbọelu ahụ ga-abụ ihe mkpali maka gọọmenti imejuputa BIM ma nweta uru nke arụpụta na arụmọrụ, site na mgbanwe mgbanwe na ụzọ e si arụ ọrụ.
Akwukwo BIM Guatemala
N'ihi na ọ bụ mba buru ibu, enwere ọganihu dị ịrịba ama na BIM. Anyị enweworị Nna-ukwu na Nlereanya na Nchịkwa nke Mwube Ụlọ Ọrụ BIM Management na Mahadum Valle de Guatemala na Universidad del Istmo na Nna-ukwu na Bim Management.
Enwere ụlọ ọrụ raara onwe ha nye ọzụzụ na Bim dịka Revit Guatemala na GuateBIM (BIM Council of Guatemala). Enwere nnabata ụfọdụ na ọkwa nke onwe. Otu ihe atụ ga-abụ ụlọ ọrụ Danta Arquitectura nke kwadoro itinye BIM. Ka anyi ghara ịhapụ ndị na-ekesa ngwanrọ BIM bụ ndị na-anaghị akwụsị ịkwalite usoro a.
Ọnọdụ Elim na El Salvador
Na El Salvador, obere ozi dị. Otú ọ dị, ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ Structuristas Consultores EC mepụtara na BIM na-apụta.
Ụlọ ọrụ: Ụlọ ọrụ TIER III na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụlọọrụ Banco Agrícola, na San Salvador.
Ha bụ ụlọ abụọ nwere ebe obibi 11,000 m2 gụnyere: ebe data dị na TIER III na ụlọ ụlọ ọrụ ụlọọrụ 5.
Nhazi ihe owuwu, nhazi HVAC na nhazi njikwa injinia, na-eji ngwa BIM na nyocha ọganiihu na ụdị BIM.
Ndị nkuzi gụnyere: Civil, Structures, Architecture, Electricity, Mechanics, Pipes.
Ọ bụ ezie na nke a bụ oru ngo na nnabata BIM, ya na ọzụzụ dị iche iche; N'ezie, akwụkwọ na atụmatụ abụghị ihe doro anya; ọ bụ ezie na ee na gị ịme ngosi uwe ngwa. Enwere ụfọdụ oghere ozi na nke a, mgbe akwụkwọ akụkọ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ọbụlagodi agụmakwụkwọ na-elekwasị anya na usoro ihe owuwu / usoro, mana echefuru ịjụ maka usoro ọrụ mgbe emechara ya ruo mgbe akụrụngwa jikọtara ya.
Ọnọdụ BIM gburugburu Nicaragua
N'ebe a, anyị na-ahụ ihe ngosi nke ebe obibi ọzụzụ, ụfọdụ ndị omeiwu ọ bụ ezie na ọ bụ karịa na ọkwa mmejuputa, ka na-amalite usoro ịmebata BIM. E nwere ụfọdụ ọmụmụ ihe owuwu nke na-ewebata okwu ahụ, dị ka ọmụmụ BRIC.
Dị ka ihe atụ, CentroCAD, nke m chere bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọzụzụ kachasị mma na Nicaragua, usoro Revit ya na-elekwasịkarị anya na Nhazi na MEP, mana ntakịrị anyị hụrụ na ya na-enye isiokwu nke ihe owuwu, ụgwọ ma ọ bụ nkwekọ ihe owuwu. Agbanyeghi na imuta BIM, obughi otua imuta imuta ihe na ngwanro karia ighota uzo nile n'uzo zuru oke ebe ihe oru a bu nani uzo esi echekwa ma obu oru data.
Ọ bụ mpaghara na-eme nri maka Autodesk nke mere BIM Congress na Nicaragua n'oge na-adịbeghị anya; akụkụ nke kpaliri ma na-aga n'ihu mbọ nke Mahadum na mkpakọrịta ọkachamara nke Geo-engineering. Site na Nzukọ 2019 BIM emere na Managua, yana ndị ọkà okwu si n'akụkụ niile nke Central America, Dominican Republic na Colombia, o doro anya na na mba a, enwere ọtụtụ ọrụ site na ngalaba ndị ọzọ, na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwere ọrụ dị mkpa, mana karịa mkpa niile itinye uche na mbọ iji bulie ikike nke BIM na atumatu ọha na eze.
BIM gburugburu Honduras
Dị ka Nicaragua, ọ bụ na usoro nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọzụzụ, nzukọ, na ịkọ ndị ọkachamara na-ewu ụlọ. Enwere ụlọ ọrụ raara onwe ha nye iji kwalite mmejuputa BIM na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ọzụzụ, dịka PC Software, Cype Ingenieros, na College of Architects of Honduras.
Enwere mmasị na ụlọ ọrụ nkeonwe ịmalite itinye BIM, na njedebe ya mgbe niile. Mwepụta nke ụlọ ọrụ ọhụụ nwere ọhụụ ọhụụ dịka Green Bim Consulting, nke raara onwe ya nye maka ịjụ ma mepee ọrụ Sustainable BIM, bụ ihe na-atọ ụtọ. Solidlọ ọrụ ndị ọzọ siri ike dịka Katodos BIM Center bụ ndị nnọchi anya Honduras.
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ndị na-ewu ụlọ na-ejikarị rụọ mita 1,136.8 n'ogo dị iche iche na Honduras, 57,5% bụ maka ụlọ obibi; 20,2% azụmahịa, 18,6% na ọrụ na 3,7% ụlọ ọrụ. N'ime ego ahụ, obere akụkụ nke ụlọ ndị ahụ jiri nkà na ụzụ na-abụghị omenala dị ka BIM iji kwadebe ọrụ.
Injinia Marlon Urtecho, onye isi njikwa ụlọ ọrụ 'Accensus Structural Systems' gosipụtara na ọganiihu na owuwu ụlọ ugbu a na-enye ohere ka elele ọrụ ahụ nke ọma:Ugbu a, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike igosipụta ọrụ ha n'ụzọ dị iche iche n'ụzọ dị mfe karị na ihe ndị ọzọ"O kwuru. O doro anya na ọhụụ a dị na nke a na-egosi na ọ ka enweghị nghọta doro anya banyere ezi okwu nke BIM.
N'agbanyeghi ozi di iche nke gosiputara na Honduras, ihe si na March 2019 gara aga, oge nke Mbido mbụ nke BIM Virtual Congress nke Central America na Caribbean. Ọ dị ntakịrị oge n'ihi na ederelarị ederede ahụ, agbanyeghị ọ na-eweta ọkụ na-atọ ụtọ maka isiokwu na-esote BIM na Central America.
N'agbanyeghị ihe isi ike nke ubi ahụ, na ụlọ ọrụ Honduran na-egosipụta ọganihu ụfọdụ n'iji BIM (ọ dịkarịa ala na ọkwa nke ihe ọmụma) karịsịa na mpaghara ụlọ, nke nyerela ohere igosi ọganihu n'ime atụmatụ nke ọrụ. N'ihe dị mkpa nke nhazi 2 (BIM Level2) ebe eji ngwa ya eme ihe dika ihe omumu nke ihe ndi ozo na nke obula nke eji eji wu ulo, nke dikariri na obodo ndi mepere emepe bu nkwa.
Otu akwụkwọ si n'akwụkwọ akụkọ Procesohn pụta, http://proceso.hn/tecnologia/2-ciencia-y-tecnologia/constructores-hondurenos-avanzan-en-el-uso-de-tecnologia-bim.html
Mgbe anyị coffeeụchara iko kọfị na ihe ọ dụ dụ na-atọ ụtọ, anyị na Gab! na BIM agwụbeghị ọdịda na Central America. N’ezie usoro ịhazi usoro ikpe ziri ezi bụ nnukwu enweghị isi n’okwu a, n’akụkụ nke ndị ga-akwalite ihe ọhụrụ na nhazi. O doro anya na enwere ihe ndi ozo, mana na akwa nhicha anyi huru opekata mpe ihe ndia dika ihe ndi mbu:
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọrụ ọzụzụ na enweghị ndị nkụzi ruru eru. A na-agụ ndị njikwa BIM na mkpịsị aka; Na-eburu n'uche na ịbịachị ndị ọkachamara n'ụwa niile dị oke ọnụ.
Ọnụ ego dị elu nke ikikere ngwanrọ (ikikere na Central America nwere ike iji ọnụahịa 3 kwụọ ụgwọ na Mexico, US ma ọ bụ Chile). Ndị ụlọ ahịa na-ekesa na-ekwu na ọ dị ala ahịa, n'ihi ya, ha ga-ebuli ụgwọ iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ndị ụlọ ọrụ nne na nna guzobere. Nke a na-akwalite ohi na egwu nke imejuputa BIM n'ihi ahụhụ ndị a na-enweta site n'aka ndị na-enye ndị ngwanrọ.
Ọnụ dị ukwuu nke kọmputa ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ BIM, dịka ntinye nke plugins interface na ngwaọrụ mpụga ma ọ bụ nsụgharị.
O nweghi omenaala dị n’ime atụmatụ na nkwadebe siri ike nke akwụkwọ dị mkpa maka ọrụ ahụ. BIM choro imejuputa uzo dika EIR, BEP, BIM Protocols, usoro iwu, wdg. -Ònye nwere oge, mgbe ha gwara m ka m malite ọrụ ahụ ụnyaahụ- A jargon maara n'etiti ndị ọkachamara na-ewu ihe bụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe, n'ihi na mgbe ị na-eme atụmatụ nke ọma, ị nwere ike ịmepụta ọrụ na oge ndekọ.
Ụdị nrụrụ dị elu nke e ji mara ọnọdụ ndị a. Mgbe ụfọdụ ị na-ezo ihe ọmụma ahụ na-enye ohere ịkwalite ụgwọ nke ọrụ ndị ahụ, otú ahụ ka ọrụ ahụ na-esikwu ike, ọ ga-adịrị ya mfe ịkụnye ya. Anyị doro anya na ịbịlite BIM ga-agbaji ọtụtụ omume rụrụ arụ n'ime ọrụ gọọmenti.
Ndị ọkachamara nke ụlọ ahụ achọghị ịhapụ AutoCAD, ka ha na-achọ ka ha ghọta ihe nwere ike ịme ihe ngosi 3D. Otu akụkụ, n'ihi na e kwesịrị inwe ihe nchụso ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbalị nke mmụta, na karịa ohere ọ bụla iji mee ka ọ dị mfe na nhichapụsị mgbe anyị hụrụ BIM dị ka ihe karịrị 3D ngosi.
Mmezu nke BIM nwere ụgwọ ya, ọkachasị na sọftụwia ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ iwu; Nke a adịghị mfe maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-agba mbọ ịlanarị na akụnụba ndị a dara mbà n'obi ebe ole na ole na-ewere nnukwu ọrụ n'ihi nnweta a na-ahụ anya. Ma bụrụ onye ọzụzụ BIM na iwu niile, ọ dị mkpa ịnwe ikikere iji wee hazie. Nchịkọta ngwanrọ iji zụọ BIM nwere ike ịpụta itinye ego nke US $ 3,500.00 kwa afọ maka naanị otu ikikere, na mba ụfọdụ dị na Central America. Ọ ka ga-ahụ otu ihe a si eme ka atụmatụ sọftụwia dị ka ọrụ a na-ebu site na nnukwu ndị na-eweta ngwanrọ.
Na mmechi, Central America n'ozuzu ya nọ na usoro nke mmekọrịta BIM, na-arụ ọrụ na nhazi 3D, mana oke oke na ogo nke anyị na-ahụ n'ọnọdụ ndị ọzọ. Maka ugbu a, anyị na-ahapụ mmelite ọhụrụ nke edemede a na-echere, mara na sitere na Congress na-adịbeghị anya anyị nwere ọgụgụ ọhụrụ mgbe ozi gachara na ọ dị nwute na enweghị usoro karịa mgbanwe nke ihe ụfọdụ.
Otú ọ dị, akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ndị dị na Central America bụ ohere na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ndị na-ahụ maka nkà mmụta sayensị, ndị onwe ha, na ndị ọkachamara na-achịkwa ịbanye n'ime ụlọ ọrụ gọọmenti tupu uru na mkpa dị maka ịhazi.
Previous Post«Previous Detuo ihe, ederede na ederede nke polygonal si Excel ka AutoCAD
Next Post Usoro akara sitere na Google Earth - na usoro 3Next »